> Misy raha ao
Ity farany dia efa isan’ireo niatrika lalao Olympika tamin’ireo mpiady totohondry. Nisongadina tamin’ity fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara ity ireo mpikatroka avy eto Analamanga. Tamin’ireo amboara 12 niadiana dia anaram-boninahitra valo no nahoron’ity ligy ity.
Hatreto aloha dia mbola niteraka resabe ny fanaovana ity fifaninanam-pirenena ity noho ny tsy fahavitan’ny famindram-pahefana teo amin’ny filohan’ny federasiona teo aloha sy ankehitriny.
Isan’ireo nahagaga an’ireo mpijery tetsy Mahamasina tamin’io fifaninanana io i Julien Rajaonarison (Analamanga) tamin’ny nandreseny an’i Jean Christophe Rasolonirina (Menabe), izay niambozona medaly alimo tamin’ny andiany voalohany ho an’ny lalao afrikanina ho an’ny tanora tany Maraoka..